Ngamana uhlaziyo lokhuseleko lweGlass Qaphela 9 ngoku iyafumaneka | I-Androidsis
Ngamana uhlaziyo lokhuseleko lweGlass Qaphela 9 ngoku iyafumaneka
Ukutyala isixa esikhulu semali kwi-smartphone ephezulu akusivumeli nje kuphela ukuba sonwabele i-terminal enezinto eziphezulu, kodwa ikwasiqinisekisa, kumvelisi, ukuba i-terminal iya kufumana uhlaziyo kule minyaka mibini izayo, ukuba sithetha i-Android kunye Iminyaka emi-3 yohlaziyo lokhuseleko.
I-Samsung Galaxy Note 9 isandula ukuqala ukufumana uhlaziyo olutsha lokhuseleko, ngeli xesha elihambelana nenyanga kaMeyi. Olu hlaziyo, ebelufumaneka iiyure ezimbalwa IRashiya, iFransi neBulgaria, ngokuthe ngcembe ifikelela kumazwe amaninzi kwaye idibanisa imisebenzi efanayo nohlaziyo lwangaphambili.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, i-Samsung ikhuphe uhlaziyo lwesi siginali, uhlaziyo olunikezela ukuphucula kwikona yokujonga ikhamera yangaphambili (ukuyinciphisa) ukongeza ekuvumeleni Inkqubo yokusebenza kwimo yasebusuku.
Isamsung izakwazisa ngeemodeli ze-4 zeGalaxy Note 10 kuzo zombini i-4G kunye ne-5G
Uhlaziyo lukaMeyi, ukongeza kuloo misebenzi mibini mitsha ingafikanga kuwo onke amazwe apho i-Galaxy Note 9 isasazwa ngohlaziyo lokhuseleko, isombulula uthotho lweebugs ezibalulekileyo kwi-Android, ngakumbi i-7 kunye neshumi elinobunzima kunye nokuphakathi komngcipheko.
Ikwasombulula ubuthathaka obuthile obufunyenwe kulungelelwaniso lwenqaku leGalaxy Note 9. Yinyanzele ngesandla ngokhetho loqwalaselo lwesiphelo sendlela yakho, ngokuya kuHlaziyo lweSoftware kwaye ukhubaze ukhuphelo oluzenzekelayo. Ngelo xesha, i-terminal iya kujonga ukuba sele ikhona.
Yile nto inokujongeka ngayo i-Samsung Galaxy Note 10
Ukuba awukwazi ukulinda ukufumana olu hlaziyo, njengoko ndihlala ndicebisa, unga zidlule kwiwebhusayithi yamadoda eSamMobile ukuyikhuphela kwaye uyifake ngesandla kwisixhobo sakho, kwinkqubo eya kuthatha kuphela imizuzu embalwa. Ukuba sithathela ingqalelo iindaba ezisinika zona, sinokwala olu khetho kwaye silinde ukufika kwesaziso esihambelanayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ngamana uhlaziyo lokhuseleko lweGlass Qaphela 9 ngoku iyafumaneka
Isamsung kunye neHuawei bangcwaba umnqwazi
I-Honor 20 iye yavuza ngokupheleleyo: yazi ukucaciswa kwayo [+ Iifoto eziyinyani]